Ingabe Ukunakekelwa Kwizinjini Zokusesha Uma Usebenzisa iDrupal? | Martech Zone
Ingabe Izinjini Zokucinga Ziyakhathalelwa Uma Usebenzisa IDrupal?
ULwesibili, April 26, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 15, 2014 UJohn Blue
Izinhlelo Zokulawulwa Kokuqukethwe ne-SEO
Ngabe i-Content Management Systems (CMS), ingakanani WordPress, Drupal, Joomla!, ubambe iqhaza ku- ukusebenzisa ngokugcwele injini (SEO)? Ngokuqinisekile ukwakheka kwesiza esibi (hhayi ama-url ahlanzekile, okuqukethwe okungalungile, ukusetshenziswa kabi kwamagama wesizinda, njll) ku-CMS efana Drupal izothinta i-SEO (amathuluzi amahle asetshenziswe ngendlela embi). Kepha ingabe izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe ngokwazo zibolekisa i-SEO engcono kunabanye, uma kwenziwa yonke eminye imikhuba emihle? Futhi, angaxuba kanjani amasistimu (ex, WordPress noma iDrupal blog asekela ifayela le- Thenga site) kuthinta i-SEO (futhi kucatshangwa ukuthi zonke ezinye izindlela ezinhle ze-SEO ziyalandelwa)?
Ngokombono wenjini yokusesha, akukho mehluko phakathi kweDrupal, WordPress, noma i-Shopify. Ngaphambi kokuthi ngishayiswe ngo “Ima kancane”, ake ngicacise. Izinjini zokusesha zibheka i-HTML ezinikezwa zona lapho zikhasa izixhumanisi. Ababheki i-database engemuva kwewebhusayithi futhi ababheki ekhasini lomlawuli elisetshenziselwe ukulungisa isiza. Yiziphi izinjini zokusesha ezibukwayo okwenziwa yi-HTML, noma okuhlinzekwa uhlelo lokulawulwa kokuqukethwe.
Isibonelo: Uma usebenzisa iDrupal, kufanele ukhethe ukuvula ama-URL ahlanzekile. Awudingi ukusebenzisa ama-URL ahlanzekile, kepha uma wenza kanjalo, uthola i-URL engaqondwa ngumuntu (isb: http://example.com/products?page=38661&mod1=bnr_ant vs http://example.com / ukubonisana / ukumaketha). Futhi, yebo, ama-URL ahlanzekile angasiza i-SEO.
Esinye isibonelo: Drupal, ngokusebenzisa i- UPathauto module, izokwakha ama-URL anengqondo asuselwe esihlokweni sekhasi. Isibonelo, ikhasi elinesihloko esithi "10 Summer Activities For Your Kids" lizothola i-URL ye-http: //example.com/10-summer-activities-for-your-kids. Awudingi ukusebenzisa iPathauto kepha kufanele njengoba isiza ukwenza i-URL yekhasi kube lula ukuthi abantu bayifunde futhi bayikhumbule.
Isibonelo sokugcina: Amamephu esayithi izinjini zokusiza ziqonde ukuthi yini esizeni sakho. Ngenkathi ungakwazi ngokwenza (ug) imephu yesayithi bese uyithumela ku-Google noma ku-Bing, kuwumsebenzi ofanele kangcono amakhompyutha. I-Drupal's XML Sitemap imodyuli kufanele ibe nayo njengoba ikhiqiza futhi igcine amafayela emephu yesiza ngokuzenzakalela futhi inika amandla okuwahambisa ezinjini zokusesha.
I-Google noma i-Bing ayinayo intshisekelo yokuthi uyayisebenzisa noma cha i-Drupal, konke abakukhathalelayo ngempela ukukhishwa kwe-Drupal. Kepha udinga ukunakekelwa ngokusebenzisa iDrupal, njengoba kuyithuluzi elenza lula inqubo yokwakha i-HTML enobungani nama-URL.
Brief eceleni… IDrupal iyithuluzi nje. Izonikezela ngezici nokusebenza okudingekayo ukusetha nokusebenzisa iwebhusayithi. Ngeke ikubhalele okuthunyelwe okuhle. Lokho kusencike kuwe. Into yokuqala ongayenza ukuthonya noma yiziphi izilinganiso ze-SEO unolwazi olubhalwe kahle, olunenjongo esihlokweni, futhi olwenziwe ngokungaguquguquki ngokuhamba kwesikhathi.
Tags: CMSuhlelo lokuphatha okuqukethweDrupalukwenziwa kahle kwenjini yokuseshai-drupal seoseo
UJohn uyiNduna Yezokudalwa Komphakathi e I-Truffle Media. I-Truffle Media Networks ihlinzeka nge-Ag Media Ongayisebenzisa, ngokusebenzisa ikhwalithi ephezulu, ukukhiqizwa kwe-turnkey nokusatshalaliswa kochungechunge lwezokuxhumana olugxile kwezamabhizinisi.
ChaCha + iPhone: Izexwayiso, iJografi, Izimpendulo, Ukwabelana
Inqubomgomo Yezikhangiso zeGoogle - Landela Leyo Mithetho!
Ngo-Apr 26, i-2011 ku-9: i-33 PM
Uqinisile impela, uJohn… izinjini zokusesha azikhathali ukuthi iCMS yakho iyini. Kodwa-ke, njengoba ngisebenze nezinhlelo eziningi zokuphathwa kokuqukethwe, ngiyakutshela ukuthi kunezinhlelo eziningi ezindala emakethe ezingenazo izici ezidingekayo zokuzisebenzisa ngokuphelele. Amandla wokuvuselela i-robots.txt, i-sitemaps.xml, ukufaka izinjini zokusesha, ukufomatha amakhasi (ngaphandle kwezakhiwo zethebula), ukuthuthukisa ijubane lekhasi, ukuvuselela idatha ye-meta… uzothola ukuthi izinhlelo eziningi zokuphathwa kokuqukethwe ziyabacindezela abasebenzisi bazo. Ngenxa yalokho, iklayenti lisebenza kanzima kokuqukethwe okungagunyaziwe ngokuphelele.
Ngo-Apr 28, i-2011 ku-12: i-55 PM
Uqinisile, John. Ngithola imibuzo eminingi kuQuora nakwabanye ukuthi iyiphi i-CMS elungele i-SEO. Impendulo imayelana nanoma yiziphi izinhlelo ezintsha zokuphathwa kokuqukethwe ezinekhono lokwenza ama-URL ahlanzekile futhi zisebenzise amathuluzi amaningi izinjini zokusesha ezithanda ukuwasebenzisa.
@Doug - nawe uqinisile. Izinhlelo ezindala zokuphathwa kokuqukethwe zivame ukungabi namandla okubandakanya kahle i-SEO.
Kwezinye izimo, ngisho ne-CMS yesimanje ingaba nomthelela omubi, noma okungenani, ngaphansi komphumela omuhle ku-SEO.
I-Joomla, ngokwesibonelo, inesilungiselelo sokumiswa sokwakha incazelo yemeta ebanzi yesayithi ezosetshenziswa kuwo wonke amakhasi lapho umbhali engakhi incazelo ye-meta yangokwezifiso. Lokhu kuholele amanye amaklayenti ami ukuthi acabange ukuthi awadingi ukudala izincazelo ezilungiselelwe ikhasi.
Kombhali wokuqukethwe oyisipiliyoni, lokhu ngeke kube yinkinga. Kodwa-ke, zonke izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe zehlisa ibha yababhali, zinika amandla ababhali abanolwazi oluncane ukuthi banikele kokuqukethwe kwabo, bengazi ukukhathazeka kokusebenzisa kahle.
Okthoba 21, 2011 ngo-1: 10 AM
Ama-CMS amahle akhipha i-HTML ngakho-ke athinta i-SEO. I-Drupal ubuhlungu obugcwele bokumisa kahle i-SEO, nganoma yini ongayikhetha. ama-xml sitemaps, ama-URL anobungani (abuyela njalo ku- / node), ama-URL azimele / izihloko zekhasi / izihloko, ama-img alt tags, ukubhuloga (ungangiqali, ukubhuloga eDrupal akunalutho ku-WP).
Siyayithanda iDrupal yamasayithi amakhulu, kepha akumnandi ukuyenza i-SEO'ify. I-WP ilula ngokwenkanyezi.